Terror Free Somalia Foundation: Cabdi Samataroow ceel bay kaaga dhacday: Soomaali waxa daawo u noqon kara ‘is jacayl’
“Nimaan waxa jooga garani, waxa soo socda ma garto,” maahmaah Soomaaliyeed.
Afeef: Marna shaki ma gelinayo Soomaalinnimada macallin Cabdi Samatar, laakiin waan ku dhaliilayaa weerarka qaawan ee uu ku qaaday raysalwasaare Farmaajo.Qoraal ku soo baxay baxay bogga Somalitalk. ayaa macallin Cabdi Ismaaciil Samatar ugu gefey raysalwasaaraha dhowaan la magcaabay ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Maxamed ‘Farmaajo.’ Weerarkan Cabdi Ismaaciil ku qaaday raysal wasaaraha ayaa ah mid aan ku cusbayn tiyaatarka siyaasadda; wuxu Cabdi hadda ka hor sidaas si la mid ah u weeraray raysalwasaarihii dawaladdii Carta, Cali Khaliif Galaydh. Run ahaantii, macallinka ayaa ku eedeeyey mudane Farmaajo inuu buug uu qorayka dib ka qalin-jebintii jaamacadda Buffalo, ee New York, inuu Maxamed Farmaajo ku aflagaadeeyey hoggaamiyayaal taariikh weyn ku leh Soomaalida dhexdeeda. Hoggaamiyayaashaas oo kala ah AHWN mudane Aadan Cabdulle Cismaan iyo Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Haddaba, haddaynu u dhabba galno eedaymaha macallinku u soo jeediyey raysalwasaaraha, waxa meesha ka cad waa ‘gorgorku haadda ka weyn…,’ is nacaybkii Soomali kala diley oo gaadhsiiyey heer bilowaadinimmada ka hooseeya ayaa meeshaa kaaga soo baxaya.
,Adiga oo halkan ka dhegeysan kara codka macallin Cabdi Samatar ku weerarayo ayaan fiiro gaara ah ugu kuur geleyaa bal mucda iyo macnaha ka dambeeya eedaymahan. Iyadoo aad weliba mooddo in macallin Cabdi ka dab qaadanayo ninka la yiraahdo J. Peter Pham, oo ah nin ku caan ah kala qoqobidda iyo kala qaybinta Soomaaliya, qoraallo badan oo Soomaaliya ku jaa’ifaynayana qoray. Haddaba lafa gurka arrintan ayaan qodobbo ka soo qaadaynaa.
1. Ugu horrayn sidaad hadalkiisa bilowga ka garan doonto, wuxu dhulka ku jiidayaa eedayn horteed sumcadda raysalwasaaraha oo uu ku sheegay “midaan waxba soo kordhinayn.” Afaaf weerarkaasi wuxu ka markhaanti kacayaa inaan arrintu ku koobnayn raysalwasaaraha qoraalkiisa, laakiin ay tahay arrin ku lug leh ‘isir nacayb.’
2. Wuxu kaloo sheegay inaan haba yaraatee macne badani ku jirin buugga raysalwasaaruhu qoray: “xigmad weyn oo qoraalkaas ku jirto ma jirto…qabyaalad badan oo reero lagu eedaynayaa ku jirta. Taariikhdii Soomaalida ayuu wax yeelayaa,” Cabdi Samatar. “Wuxu masaxayaa taariikh xalaal ah, ninka waxaa qoray, oo qoray dhowaan, weeraray Cabdirashiid iyo Aadan Cabdulle, waxaba ma soo kordhin karo.” Arrintan ayuu macallinku uu doonayaa inuu maxruumintaas uu u isticmaalo eedayan ku aaddan raysalwasaare Farmaajo, isagoo ku andacoonaya ama macallinku inkirsan inay jireen isu dhowaanshaha hoggaamiyayaashaas sharafta leh iyo xukuumaddii Talyaanigu. Sida hoggaamiyayaasha kale ee adduunka, ama ha noolaadaan ama ha dhintaane, ayaa looga faalloon karaa wixii taariikhdu kaydisay. Taas hadduu macallinku dood ka qabo, ha ogaado in halkan uu ku noolyahay ay tahay America oo loo oggol yahay isaga xataa inuu wax ka sheegi karo aabbayaashii Maraykanka.
3. Cabdi wuxu kaloo ku andacooday in raysalwasaaruhu qabaa’illada qaar ammaanay, qaarna aflagaaddeeyey. Run ahaan kolkaan anigu akhriyey raysalwasaaraha buuggiisa, aad buu uga nadiifsanaa qoraallo badan oo macallin Cabdi Samatar qoray. Wuxu sheegay mudane Farmaajo waa taariikh dhab ah, waa haddii maskax fayoobi wax loo qiimaynayo.
4. Wuxu macallin Cabdi si fadeexadi ku jirto ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay ka soo hor jeestaan raysalwasaare Farmaajo. Waxa isweydiin leh waayo shacabka uu u baaqayaa? Aaway Soomaaliyi, inteebuu ku ogaa? Miyaanu ogayn silica ka dhergey dadkeennii? Horaa loo yiri bay ila tahay, ‘ninka waranka kugu dhufta, iyo kan kugu dhaqdhaqdhaqaajiyaa, keebaa daran?’ waa asaddaha iyo ka fiirsi la’aanta mudane Cabdi Samatar ku xambaartay isirnabacayb daah la huwiyey oo la wada ogyahay inay tahay tan qarankeennii baabi’isay.
Dad badan baa isweydiiya dhibaatada Soomaalida ee sii laba laxaadsanaysa belaayada dabada ka sii waddaa meeshay kaga timaaddo. Run ahaantii Soomaaliya hadda arrintu qabyaalad waa dhaaftay waxay maraysaa ‘isir nacayb’ dhan walba ka socda. Haddaba isir nacaybkani sidee waxyeelladiisu uga weyntahay qabyaaladda? Su’aashaas aniga ra’yigayga waa inaad la necbaato ummad ama dadyow gaara wax allaale iyo wixii dhaqdhaqaaq nololeed ah, hadday xataa noqoto ra’yi ka hadal. Waxan tusaale u soo qaadan karaa golayaasha siyaasadda marka Sooomaalidu isugu timaaddo sia ay isu xagxagtaan. Marka la rabo in Soomaliya masiirkeeda siyaasadeed laga hadlo, mid dhaqan, mid dhaqaale horboodayaashu waa ka ilaaliyaan waxan iyaga ku qabiil iyo ra’ayi ahayn. Ummadda kale inay ka dhex muuqdaan, xataa haddii aqy noqoto baahi aanay daboolo karain, waa ka soo horjeensadaan, Isku xooriyoo, ummad badan oo Soomaali ah ayaa waxa marin habaabiyey isir nacayb, waana dhan walba ee taa ogow, macnaha qola kasta waa leeyihiin.
Labaatan sano ayay maraysaa tan iyo intii waddankeenna dhibaatada u weyni ka aloosantay. Waxa intaa sii durkinayey dhibaatada maaha qabyaalad keliya, ee waa isir iyo diir nacayb bulshadeenna ku dhex beermay. Waana tan macallin Samatar iyo kuwa kale oo badan ku dhammaysan doonaan noloshooda, haddii aan ilaahay garansiin dariiq ka wanaagsan kaa ay ku taagan yihiin. Maxaa ina ka lumi lahaa haddaan isku jeclaanno Soomaalinnimo? Ilaahay baan ku dhaartee, maalintaanan qof Soomaaliya arag, xataa Internet-ka ayaan ka daawadaa, keliya inaan arko qof Soomali ah wejigiisa, farxad ayaa igu abuuranta markaan arko qof Soomali ah. Haddaba sida qoraalkayga cinwaankiisu tilmaamayo, waxa daawo inoo noqon kara isjacayl. Meesha uu doono ha ka yimaaddee, maxaa ina ka lumayo haddaynu Soomaalinnimada isku jeclaanno, isu garowno, isu tanaasullo, iska deyno isriixa iyo isxaqiraadda. Wadaad iyo waranle Soomaali dariiqa ayay ka lunsan tahay waana arrin u baahan in si taxaddar leh loo eego. Wadaaddada waxa halhays hadda u noqotay: “difaaca diinta alle…,” waxay taa ku beddeleen halhayskii ahaa “difaaca dhulka hooyo,” dal, diin iyo dad ma kala hadhaan sidaa wax ma u fahmayaan? Waa haddii ilaahay solonsiiyo.Gebabgebadii, macallin Cabdi iyo Soomaali meelkasta ha joogtee waxa wanaagsanaan lahayd in la is taageero, oo laga dabqaato ‘ilko wada jir bay wax ku gooyaan.” Sidani si maaha, shacabkeenna meel walba ku silcaya dan uma aha, haddii aan laga wadin doolshe ha cuneen.
W.Q: Maxamud Axmed Email: maash68@gmail.com
Mahamud Ahmad serve as political analysts Terror Free Somalia Foundation
by Mohamed, Mohamed A., M.A., STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO, 2009, 86 pages; 1464764
Talo ku socota Raysalwasaare Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Maxamed Farmaajo), Dhismaha dawladda iyo dib-u-qaabaynta maammulka